Haweenay loogaliyay gacan bir ah balse dareen leh - BBC News Somali
Haweenay loogaliyay gacan bir ah balse dareen leh
Image caption Almerina Mascarello
Seeynisyahano ku sugan magaalada Rome ee dalka Talyaaniga ayaa shaaciyay in ay soo saareen gacan samays ah oo leh dareemaha taabashada, waxaana gacantan lagu rakibay haweenay ay horey gacanta uga go'day.
Haweenaydan ayaa lagu magacaabaa Almerina Mascarello, taas oo rubac qarni ka hor gacanteeda ku waysay shil, waxayna sheegtay in ay ula mid tahay sidii iyada oo gacanteeda dib u heshay oo kale.
Kooxdan dhaqaatiirta ah ayaa sanadkii 2014-kii soo saaray gacanta dareenka taabashada leh, balse qalabkii lagu rakibay ayaa ahaa kuwa aad u weyn oo aanan lala aadi karin meel ka baxsan sheeybaarka.
Balse hadda aaladaha cusub ee loo isticmaalay gacanta ayaa ah kuwa yaryar, islamarkaasna fudud.
Dadka soo saaray ayaa isugu jira dad ku taqasusay neerfaha, qaarkood injineero ah, kuwa danabyada iyo qalabka qabta shaqada dadka, waxayna ka kala yimaadeen dalalka Talyaaniga, Switzerland iyo Jarmalka.
Dareemayaasha lagu rakibay gacanta waxa ay ogaan karaan in sheeyga gacanta taabtay uu yahay wax adag ama wax nugul.
Fariimahan ayaa lagu rakibay qalab kumbuyuutar oo maskaxda ugu sii turjumaya luuqad ay fahmi karto.
Almerina oo indhaha loo xiray ayaa kala sheegtay in sheeyaha la taabsiiyay ay yihiin kuwa adag ama kuwa fudud.
Waxa ay hadda gacanta ku qabsan kartaa waxyaabo badan sida in ay ku labisato iyo in ay kabaha ku gashato.
Seeynisyahanada ayaa rumeysan in ay soo saari karaan gacan ka fiican tan bini'aadamka oo qaban karta shaqooyin badan.
Haweenaydan ayaa gacanta isticmaashay muddo lix bilood ah, balse waa laga celiyay hadda maadaamaa gacanta ay tahay mid tijaabo ahaan uun loo sameeyay oo aanan ahayn mid rasmi ahaan iyaga loogu talogalay.
Waxaase la rajaynayaa in lasoo saaro gacantan qaab ganacsi ah, dadka ay gacmaha ka go'een oo dhana ay iibsan karaan.